Ururka Somaliliito ee Dalka Finland oo Wada Qorshe Dib Loogu Celinaayo Kumanaan Qaxooti Soomaaliyeed | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Ururka Somaliliito ee Dalka Finland oo Wada Qorshe Dib Loogu Celinaayo Kumanaan...
Ururka Somaliliito ee Dalka Finland oo Wada Qorshe Dib Loogu Celinaayo Kumanaan Qaxooti Soomaaliyeed
Wafdi ka socda Ururka Somaliliito oo ah ururka ugu weyn ee Soomaalida ee dalka Finland oo ay wehliyaan saraakiil ka socota dowladda Finland ayaa ku wajahan magaalada Muqdisho, sida ay ku waramayaan ilo wareedyo ku dhow Ururka Somaliliito oo ay warbaahinta qaar qortay.
Tan iyo wixii ka dambeysay markii dib loo soo celiyay dad Soomaali ah oo muddo sharci la’aan ugu noolaa dalka Mareykanka, ayaa waxaa sidoo kale soo badanaya warar ku saabsan suurtagalnimada in dalal Yurub ah ay iyaguna qorsheynayaan dib u soo celinta qaxooti Soomaaliyeed oo dalalkaas ku noolaa, kuwaas oo isugu jira dad derajada qaxootinimada horay loo siiyay iyo kuwa aan weli helin ogolaanshaha degitaanka dalalka Yurub.
Sida aan wararka ku heleyno waxaa hadda socda qorshe ay Muqdisho ku imaanayaa saraakiil ka socota Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Finland, Sirdoonka Finland iyo weliba madax ka socota Ururka Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Finland (Somaliliitto) oo iyaguna garwadeen u ah saraakiishan Finnishka ah.
Wafdiga Somaliliito ee doonaya inay Soomaaliya u safraan ayaa ayaa waxaa ka mid ah Guddoomiyaha Ururkaas Carshe Said, Guddoomiye ku xigeenka Ururkaas, Rage Abdulrahman iyo Xoghayaha Arrimaha Bulshada Ururkaas Ahmed Abdullahi Imad, sida ay sheegayaan xogo laga helayo Somaliliito.
Wararku waxey intaas ku sii darayaan in saraakiishan Finland ka socota ay la kulmi doonaan wasiirka arrimaha gudaha ee Soomliya, hoggaanka socdaalka iyo qaar ka tirsan madaxda maamul-goboleedka.
Saraakiisha Finnishka ah oo ay garwadeen u yihiin shaqsiyaad nuucan oo kale ah ayaa waxey horay ugu guuleysteen in qaxooti u celiyaan dalal ay ka mid yihiin Ciraaq iyo Afghanistan, waxeyna hadda doonayaan iyagoo adeegsanaya Soomalidan in ay soomaali badan oo ku nool Finland dib ugu celiyaan.
Shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Finland ayaa walaac ka muujinaya tallaabadan ay Finnishku ku doonayaan in ay dib ugu celiyaan qaxootiga ah ee kun sugan Finland. Waxaa sidoo kale walaac xooggan laga qabaa hab-dhaqanka uu Ururka Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Finland la soo baxaya, hab-dhaqankaas oo ah mid sida la sheegayo aan ka turjumeyn hawshii ururka loo igmaday.
Maamulka Somaliland ayaa horay u diiday in dadka Soomaaliyeed dib loogu celiyo deegaannada ay maamuliyaan, laakiin sida hadda muuqata Ururka jaaliyadda Soomaaliyeed ee Finland (Somaliliitto) ayaa fuudeynaya isfaham dhexmara Soomaaliya iyo Finland, isfahamkaas oo dib loogu celinayo qaxootiga Soomaliyeed ee ku dhaqan Finland.
Qorshe nuucan oo kale ah ayaa horey waxaa ugu dhaqaaqay Waddamada Denmark iyo Norway oo iyana qorsheynaya in Soomaali badan oo qaxooti ah oo lagala noqday sharcigii degenaansho ee wadamadaasi dib ugu celiyaan dalka Soomaaliya
Previous articleCiidamada Dowladda oo Al-shabaab kala wareegay Deegaano ka tirsan Galgaduud.